Ndị Taliban na -agba Alakụba Emirates nke Afghanistan hụrụ ụmụ nwanyị na mgbaghara n'anya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ndị Taliban na -agba Alakụba Emirates nke Afghanistan hụrụ ụmụ nwanyị na mgbaghara n'anya
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Nzukọ ndị nta akụkọ Taliban
Ezigbo akụkọ na -aga n'ihu.
Onye ọchịagha A'dead 'Taliban na -enwe nzukọ na Kabul, na -ekwe nkwa nchekwa maka ndị dọkịta, ndị ọchụnta ego.
Onye na -ekwuchitere ndị Taliban kwukwara na nnọkọ mkparịta ụka, gọọmentị ọhụrụ ya ga -ekwe nkwa ikike ụmụ nwanyị n'okpuru 'oke nke Islam' mgbe iweghara Afghanistan.
Ndị Taliban ekwupụtala mgbaghara nkịtị maka ndị ọrụ gọọmentị Afghanistan niile ma kpọọ ha ka ha laghachi ọrụ.
Oku a na -abịa ihe na -erughi ụbọchị abụọ ndị agha Taliban batara n'obí onye isi ala wee kwupụta agha na Afghanistan agwụla.
A kọrọ na ndị Taliban ka na -enwe mkparịta ụka maka inyefe ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba ahụ.
Nabata na ndị enyi Taliban na -achị Emirate Islam ọhụrụ nke Afghanistan!
Ka ọ dị ugbu a, Enamullah Samangani, onye otu kọmịshọna ndị Taliban, kwuru na ụmụ nwanyị kwesịrị isonye n'ọchịchị ọhụrụ ha. Ọ kpọkwara "akụkụ niile" isonye n'ọchịchị ọhụrụ.
N'otu oge ahụ, ụlọ ahịa dị na Kabul na -ere burqas na -eme azụmahịa dị egwu na ụmụ nwanyị pere mpe ka a hụrụ n'okporo ụzọ Kabul na Tuesday, dị ka akụkọ si kwuo.
N'oge nzukọ ọgbakọ nchekwa UN na Mọnde maka nsogbu dị na Afghanistan, onye nnọchi anya UN nke mba ahụ Ghulam Isaczai kwuru na ndị bi na Kabul kọrọ na ndị otu Taliban amalitela nyocha ụlọ n'ụlọ na-achọ ndị na-akwado gọọmentị.
Ndị agha Taliban na -eweghara Kabul
O kwukwara na ya anatala akụkọ ogbugbu ezubere iche na ịkwakọrọ ihe n'isi obodo
Onye isi ala US Joe Biden, n'okwu mkparịta ụka televishọn sitere na East Room nke White House n'ehihie Mọnde, kwuru na "m na -akwụsi ike n'azụ mkpebi m" ịwepụta ndị agha US na Afghanistan yana na ya 'agaghị ada mbà na oke ọrụ m. ebe anyị nọ taa. ”
Biden kwetara na nchịkwa ya atụghị anya ọdịda gọọmentị ngwa ngwa n'agbanyeghị mwakpo ndị Taliban. Onye isi ochichi Democratic US kwuru na nkwekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ onye bụbu onye isi ala Donald Trump.
Isi na onye nta akụkọ CNN nwere obi ike:
N'okporo ụzọ Kabul taa- eche na anyị na-ahụ akụkọ ihe mere eme pic.twitter.com/wcVKzbT6oJ
Otu tweet chịkọtara egwu:
Ị ma etu ụmụ nwanyị na -atụ ụjọ si nọrọ na Afghanistan ugbu a? Ee, ị nwere ike see foto ma soro ha see. Mana anaghị enye ụmụ nwanyị Afganistan ohere ịrụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ndị Taliban nye iwu ịgba ohu, mmeko nwoke, nwa di na nwunye (mmeko nwoke), ị ga -anabata nke ahụ? Kedu oke gị ma a bịa n'ịchekwa oke ruru mmadụ? Ị naghị eme atụmatụ iguzogide ndị na -ekwenyesi ike na ndị iro nke mmadụ ma ọlị?
Site n'ikike: Usoro mgbasa ozi
Akara Ọhụrụ nke Alakụba Alakụba nke Afghanistan